Sidee inuu ka soo kabsado tirtiray ama u Khasaaray MXF Videos
> Resource > Ladnaansho > Sidee inuu ka soo kabsado tirtiray ama u Khasaaray MXF Videos
I caawi! Sidee ayaan u soo kaban karto, MXF Videos?
Qof kasta oo i soo jeedin karaan barnaamijka file ah in uu awoodo in uu ka soo kabsado MXF files oo la tirtiray ka drive Seagate adag? Mahad badan!
Dhab ahaantii, waxaad soo kaban karto, tirtiray MXF videos ka wadid aad u adag iyadoo la kaashanayo barnaamijka dhinac saddexaad ah. Waxa aad u leedahay in la sameeyo waa in uu ka tago wadid aad u adag oo keliya iyo Google tool soo kabasho.
Wondershare Data Recovery , ama Wondershare Data Recovery for Mac waa barnaamij sida kan kara inuu ka soo kabsado tirtiray ama formatted files MXF labada your computer iyo aaladaha kaydinta dibadda ah. Waxaa sidaas lagu kalsoonaan karo in aad kaliya ku abuurtaan barnaamijka iyo iskaan qalabka HDD ama kaydinta dibadda ah, oo markaas waa inaad soo kaban karto, MXF videos eegista.
Waxaad kala soo bixi kartaa version tijaabo ah ugu horeysay Wondershare Data Recovery ah. Waxaa la socon kara labada Windows computer iyo Mac.
Qabtaan MXF Recovery in 3 Talaabooyinka
Fiiro gaar ah: Tilmaan MXF kabashada video waxaa loo qoray Wondershare Data Recovery for Windows. Haddii aad tahay user Mac ah, fadlan kala soo bixi version Mac ah.
Tallaabada 1 Select Recovery Mode
Ka dib markii laga bilaabo barnaamijka, waxaad arki doontaa daaqad oo muujinaya 4 hababka soo kabashada. Si aad u soo kabsado tirtiray MXF videos, waxaad dooran kartaa "File lumay Recovery" mode.
Fiiro gaar ah: Fadlan ha soo dajiyo Wondershare Data kabsan Risaalo halka aad u socoto inuu ka soo kabsado files MXF ka.
Tallaabada 2 Barzakh Scan ama Device External Kaydinta Halkee Your MXF Faylal ay yihiin masaxay
Ka dib markii xulashada habka dib u soo kabashada, oo dhan qoruhu iyo aaladaha kaydinta xiran in your computer oo dhan lagu soo bandhigi doonaa. Waxaad u baahan tahay oo kaliya dooro mid sax ah ka dibna riix "Start" in iskaan faylasha lumay MXF.
Fiiro Gaar ah: "Enable Deep Scan" waxaa laga heli karaa sidoo kale, laakiin waxa ay qaadataa wakhti ka sii dheer.
Tallaabada 3 Falanqeynta Kulanka Xiisaha Leh ee Original Magacyada helay MXF faylasha iyo Them Xulo Ladnaansho
Scan ka dib, dhammaan faylasha helay, oo ay ku jiraan MXF videos doonaa oo dhan lagu qoran qaybaha ama jidka. Waxaad ku eegaan karo magaca asalka ah oo ka mid ah si ay u hubiso in aad u doonayay files MXF ayaa laga helay ama aan.
Dooro kuwa MXF faylasha aad rabto in aad soo kabsadaan ka dibna riix "Ladnaansho" iyaga badbaadiya, si aad xijaab deegaanka.
Fiiro gaar ah: Fadlan ha badbaadiyo soo kabsaday MXF videos in ay qalab xijaab ama kaydinta asalka ah inta lagu guda jiro dib u soo kabashada, haddii kale ay la overwritten laga yaabaa.
Mid ka mid ah wax aad og tahay in ay tahay in ay files MXF tirtiray ama formatted aan si joogto ah qoysay ka hor inta aan overwritten by xog cusub. Suurtogal tahay in aad iyaga u soo ceshano karaa haddii aadan gelin files cusub folder asalka ku saabsan qalabka computer ama kaydinta la software kabashada MXF ah sida Wondershare Data Recovery.